को पुग्ला फाइनल ? काठमाडौँ र महेन्द्रनगर बीच प्रतिस्पर्धा – WicketNepal
को पुग्ला फाइनल ? काठमाडौँ र महेन्द्रनगर बीच प्रतिस्पर्धा
Birat Jung Rayamajhi, २०७४ चैत्र २९, बिहीबार ११:१७
विकेटनेपाल, २८ चैत, बिहिबार
धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) को दोस्रो क्वालिफायर खेलमा महेन्द्रनगर युनाइटेड र काठमाडौं गोल्डेन्स प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। वर्षाको कारण बुधबार सुरु भएको खेल ओभर मात्रै हुन पाएको थियो जसपछि खेल रद्द गरिएको थियो। मंगलवार भएको एलिमिनेटर खेलमा सिवाइसी अत्तरियालाई पराजित गरेसंगै महेन्द्रनगरले दोस्रो क्वालीफायरमा स्थान बनाएको हो।
खेल १२:३० बजे बाट एसएसपी मैदानमा सुरु हुने तालिका रहेको छ। खेलमा बिजयी हुने टिमले शुक्रबार हुने फाइनल खेलमा टिम चौराहा धनगढीको सामना गर्नेछ।